Axmed Madoobe: “Beesha Caalamku waxay noo sheegtey in naloo talinaayo” - iftineducation.com
Axmed Madoobe: “Beesha Caalamku waxay noo sheegtey in naloo talinaayo”
aadan21 / January 29, 2016
iftineducation.com – Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan ayaa maanta oo Jicme ah dib ugu laabtey magaalada Kismaayo, waxaana uu faah-faahin ka bixiyey shirkii dhawaan ka dhacay Muqdisho oo lagu go’aamiyey qaabka doorashadu noqoneyso sanadkan 2016.
Khudbadda uu jeediyey Axmed Madoobe ayaa ahayd mid xasaasi ah isla markaana uu si furnaan ah uga hadley wixii Muqdisho ka dhacay.
Madaxweynaha Jubaland ayaa ugu horeyn sheegey in shirkii Kismaayo bartamihii bishan Janaayo 2016 in lagu guuldaraystey, waxaana uu ku tilmaamey mid nasiib darro ah, maadaama hoggaamiyaal Soomaaliyeed oo keliya ay go’aan gaari waayeen.
Kadib fashilki ka dhacay shirkii Kismaayo ayuu sheegay in Muqdisho loogu yeeray oo Beesha Caalamku u yeertey oo aan anigu u bixiyey ayuu yiri Beesha Lixaad, ayuu yiri Madoobe.
Axmed Madoobe ayaa yiri Beesha Caalamku waxay na weydiisey in nala sugaayey muddo saddex bilood ah oo aan soo bandhigano waxaan hayno, waxaan u sheegney in aan waxba isku waafaqi weyney, sidaas darteed waa la idiin talin ayey nagu yiraahdeen, waxaana ay Dowladda Federaalka ka codsadeen in ay go’aan gaaraan iyagu.
Raysalwasaaraha ayaa noo yimid wuxuuna sheegey in ay go’aankaas gaareen. Beesha Caalamkuna waa ku raacdey.
Anagu wixii aan raadineyney midna maan helin, Xildhibaano Degmooyin ku yimaada waan weyney, tii gobolkana waan weyney ayuu yiri Axmed Madoobe, sidaas darteed shir Kismaayo dib loogu soo noqonaayo ma jirto oo culeyskiisa waxba ku fali mayno, meelo kale halagu saxiixo, idinka ayeyna idiin taalaa go’aanka aad qaadanaysaan, laakiin ama doona ama hadoonina ayaa nala ku yiri ayuu yiri Madaxweynaha Jubaland Madoobe.
War saxaafadeedka Axmed Madoobe oo ahaa mid xasaasi ah isla markaana uu taabtey arrimo badan hoos ka hdegayso.
Axmed Madoobe: Waa Nala Qasbay